Busan dia manangana fotodrafitrasa MICE hentitra ho toy ny tanànan'ny fivoriambe iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Busan dia manangana fotodrafitrasa MICE hentitra ho toy ny tanànan'ny fivoriambe iraisam-pirenena
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Septambra 1, 2020
Fikambanana fizahan-tany any Busan
Busan dia tanàna fivoriambe iraisam-pirenena izay nahaliana ny olona manerantany. Araka ny fanambaràn'ny Union of International Associations (UIA) tamin'ny taona 2018, manana ny laharana 4 i Busanth any Azia ary 12th eo amin'izao tontolo izao amin'ny maha-tanàna fivoriambe iraisam-pirenena. Busan dia eken'ny besinimaro ho tanàna fivoriambe iraisam-pirenena malaza eran'izao tontolo izao ary nijanona ho isan'ireo tanànan'ny fivoriambe iraisam-pirenena 15 ambony indrindra tao anatin'ny enin-taona lasa. Busan dia afaka nihazona an'io toe-javatra io noho ny fotodrafitrasa matanjaka amin'ny maha mpampiantrano fivoriana azy. Ny tanàna dia mirehareha amin'ny toerana namboarina amin'ny habe isan-karazany izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpanomana fihaonana ary koa ny rafi-pitantanana ara-pitantanana sy ara-bola ilaina hampiantrano hetsika mahomby. Raha lazaina amin'ny teny hafa, Busan dia tanàna mety amin'ny fampiantranoana ny fivoriambe iraisam-pirenena ary afaka mandray ny hetsika MICE isan-karazany nefa tsy misy olana.
Ny maha-matihanina sy ny fandaminana amin'ireo ivon-toeran'ny Convention
Loharano: Busan Tourism Organization
Loharano: Busan Port International Exhibition and Convention Center (BPEX)
Busan dia manana safidy isan-karazany amin'ny efitrano fivoriambe. Ny Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO) dia nanohy nampiantrano fivoriambe iraisam-pirenena ho ivon'ny fivoriambe lehibe tao Busan. Ny velarantanin'i BEXCO mitontaly 46,380㎡, ao anatin'izany ny efitrano fivoriambe izay mahazaka olona 5,340, ary efitrano fivoriambe 50 sy efitrano fivoriana iray. Ao amin'ny 2023, efitrano fampirantiana fahatelo no antenaina hisokatra ho an'ny fampiantranoana hetsika amin'ny ho avy izay misy karazany hafa noho ny habeny sy ny toetrany. Ny tranon'ny Nurimaru APEC ao Haeundae sy ny BPEX ao amin'ny faritra afovoan-tanàna dia mirehareha amin'ny fomba misokatra ho an'ny ranomasina izay manome rariny ny lazan'ny Busan amin'ny maha tanàna an-dranomasina azy. Ny ivon-toeran'ny fivorian'ny Busan dia tsy mirehareha afa-tsy ny fahaizany ambony ihany fa koa ny toerana tsy miovaova.
Fihetseham-po tsy manam-paharoa amin'ny toerana tsy manam-paharoa
Ny Toerana tsy manam-paharoa ao Busan dia azo ampiasaina amin'ny fivoriambe sy fiaraha-misakafo. Ny Busan Cinema Center dia mari-pamantarana malaza an'i Busan voatanisa ao amin'ny Guinness Book of Records noho ny tampon-tranony, izay mamirapiratra isaky ny alina noho ny fametrahana jiro LED maherin'ny 40,000. Ao amin'ny Toerana tsy manam-paharoa, ny efitrano fivoriambe, ny efitrano fampisehoana, ny teatra kely sy salantsalany, ny seho ivelany, ary ny efitrano malalaka misy vodin-trano dia mijanona ao anaty trano mahafinaritra, ahafahana manao hetsika manokana. Toerana tsy manam-paharoa hafa dia ahitana ny Museum DAH, tranombakoka media nomerika lehibe indrindra any Korea, The Bay 101, izay malaza amin'ny fahitana azy tsara amin'ny ranomasina, ary ny F1963, orinasa vy taloha izay novaina ho sehatra ara-kolontsaina.
Fisafidianana hotely lehibe
Ny hotely Busan dia manampy amin'ny lazany ihany koa amin'ny maha tanàna fivoriambe iraisam-pirenena azy. Miisa 59,791 ny efitrano ao Busan, 15,481 amin'ireo no miorina ao amin'ny faritra Centum City sy Haeundae mba hidirana mora foana. Ny trano fandraisam-bahiny sy hotely misy kintana dimy an'i Busan dia zaraina mitovy manerana ny tanàna, izay midika fa ny mpanomana hetsika dia afaka misafidy izay safidiny, arakaraka ny teti-bola sy ny mampiavaka azy ireo. Ny tena zava-dehibe kokoa, ny trano fandraisam-bahiny any Busan dia tsy vitan'ny fampiantranoana, fa miasa ho toerana hetsika MICE ihany koa. Ny fomba fijerin'ny ranomasina, sakafo manokana ary serivisy miavaka izay omen'ny hotely Busan ihany dia anisan'ny mahatonga an'i Busan ho mpanatrika fivoriambe sy fanasana tsy manam-paharoa.
Rafitra fanohanana sy tamba-jotra
Busan koa dia tohanan'ny fanohanana matanjaka sy tambajotra matanjaka. Ny Organisation Busan Tourism, izay natokana hanintonana ireo fivoriambe iraisam-pirenena eto an-tanàna, dia manohana hetsika ho an'ny fisarihana, fampiroboroboana ary fampiantranoana ireo fivoriambe iraisam-pirenena ao Busan. Ireo hetsika ireo dia manomboka amin'ny hetsika manintona sy fampiroboroboana any ivelany ka hatramin'ny fanampiana ara-bola sy serivisy ho an'ny fivoriambe hatao ao Busan. Tamin'ny alàlan'ny fanohanana sy fiaraha-miasa toy izany, Busan dia nahavita nanintona tamin'ny fomba mahomby ny Kongresin'ny mikraoba iraisam-pirenena (IMC) 2022 sy ny Kongresy iraisam-pirenena iraisam-pirenena (IGC) 2024. Ny Busan MICE Alliance, misy orinasa MICE 183, dia iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny Busan Tourism Organization izay manohana ny hetsika MICE amin'ny alàlan'ny tamba-jotra matanjaka.
Busan dia tanàna iray izay miroborobo miaraka ny fizahantany sy ny orinasa. I Busan no notondroina ho "Tanànan'ny fizahantany iraisam-pirenena" voalohany any Korea, ary ny faritra Haeundae dia notondroina ho "Zone of Convention International Convention." Tamin'ny alàlan'ny fifanarahana fanohanana governemanta naharitra dimy taona, antenaina hanamafy ny fotodrafitrasa sy ny rafitra fanohanana miavaka i Busan rehefa mandroso ho tanàna fivoriambe iraisam-pirenena manerantany. Ho amin'izany, tsy mitsaha-mivoatra sy mandroso ireo fotodrafitrasa isan-karazany ny tanàna. Rehefa mandinika ny toerana hanaovana ny fivoriambe iraisam-pirenena manaraka, dia ataovy Busan ny safidinao voalohany!
Nanainga ny fivorian'ny komisiona UNWTO ho an'i Afrika i Tanzania ...
Toerana aiza no misy ireo mpizahatany mahalala fomba indrindra?
WTTC dia mamaly ny tolo-kevitra farany avy amin'ny EU
The Lambda Variant: fanoherana vaksiny ary maro hafa ...
Tsy hametraka famerana ny mpizahatany rosiana i Torkia
Manambara ny fifidianana talen'ny talen'ny Air Canada
Sokafy ny sisintany US miaraka amin'ny fitsapana fahatongavan'i COVID: World ...
Midera ny hetsika ataon'ny kaongresy amin'ny ekipa sy misokatra ...
Misokatra ny hotely avo indrindra eto an-tany any Shanghai, Sina
Mitadiava asa: Tenenin'i Danemark ireo mpifindra monina mba hiasa ho an'ny mahasoa ...
Aza mandeha any Espana, Portugal, Chypre, Cuba ...
Qatar Airways dia manitatra ny fitsarana IATA Travel Pass
Mamono Amerikanina tokoa ve ny sarontava? Ary ny ...
COVID-19 Delta Variant miakatra ambonin'ny tany
Mamela an'i Russia hiditra amin'ny vaksiny feno i Hongrie ...
Mandehandeha mamaky ny lova Seychelles
Miaraka amin'ny fanarenana ny fizahan-tany ho an'i Afrika, ny Arabo Saodita ...
Masoivoho Vaovao momba ny fandriam-pahalemana ny Masoivoho UAE any Israel
Ny sehatry ny fizahantany dia tokony hambaran'ny ...
Miala amina pirinty maintso mandritra ny fialantsasatra any Seychelles
Nankany Portiogaly ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika ...
Mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny volana voalohan'ny Phuket ...
IATA: Vaomiera eropeana tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy
Rosiana Sputnik vaksinina tombony ho an'ny fizahan-tany Phuket
Vonona ny hampifandray an'i Kanada sy Etazonia amin'ny Air Up ny Air Canada ...
Mpizahatany mankany Hawaii: Tianay ny tsy hahita anao bebe kokoa
Mahita ny mpizahatany iraisam-pirenena voalohany ny seranam-piaramanidina Samui nanomboka ...
Misaotra an'i St. James ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika ...